Howlgal aan caadi aheyn oo ka dhacay Balcad
Ciidamada dowladda ayaa howlgal dad iyo hub lagu qabtay waxa ay ka sameeyeen degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
Howlgalkaani oo ay iska kaashanayeen ciidamada Milatariga iyo kuwa Nabad sugida dowladda ayaa waxaa laga sameeyay maanta degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe oo dhawaan dowladda ay kala wareegtay Xarakada Al Shabaab.
Gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe ee dowladda Cabdi Jiinoow Calasoow ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka lagu xaqiijinayay amaanka degmada ayna ku qabteen rag ka tirsan Al Shabaab oo mid ka mid ah uu sheegay in uu watay gaari ay ku jiraan waxyaabo qarxa iyo saanad Milatari.
Taliyaha ciidamada dowladda ee degmada Balcad Bashiir Maxud Xirsi ayaa dhankiisa sheegay in amaanka degmada ay ku qabanayaan gacan bir ah cid waliba oo ay arkaana inay qalqal galinayso ay talaabo ka qaadayaan.
Ciidamada dowladda ayaa baaritaano joogta ah ka bilaabay deegaanadii u dambeeyay oo ay kala wareegtay Al Shabaab oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni daro.